Who were Bengali, so called Rohingya?: အမေရိကန်၊ နယူးယောက်မြို့မှာ ဘီဘီစိကို ဆန္ဒပြမည်
လာဖို့ ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့ သောကြာနေ့မှာ အမေရိကန်မှာ ရောက်နေကြတဲ့ ရခိုင်လူမျိုးတွေက ဦးဆောင်ပြီးတော့ တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကို တွေ အပါဝအ၀င် ဘီဘီစီရုံးဌာနခွဲ ကို သွားရောက် ဆန္ဒပြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နယူးယောက်ရဲဌာနမှ ပါမစ်ယူနေတာဖြစ်လို့ နည်းနည်းလေး အချိန်ကြာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင်း ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက်နေ့ ပါမစ်ရမည်ဖြစ်ပါတယ်လို့ ရဲက အကြောင်းပြန်တာကြောင်း အဲဒီနေ့မှာ ဆန္ဒပြသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ သမိုင်းလိမ် မူဆင်လင်တွေက ဘီဘီစီသတင်းဌာနမှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ ယနေ့ အချိန်ထိ တောင်းပန်ခဲ့ခြင်း မရှိသေးတာကြောင်း ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားကြဖို့လည်း တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ ဆန္ဒပြဖို့ အတွက်တော့ အချိန်ကိုတော့ အတိအကျ မသတ်မှတ်ရသေးဘူးလို့ ဆန္ဒပြဖို့ ဦးစီ ဦးဆောင်လုပ်နေတဲ့ လူငယ်တယောက်က ပြောကြားသွားပါတယ်။
Posted by ရခိုင်ချစ်သူချေ at 11:21 AM
hiii, myo sanng ,,,, mother fucker,,,, you didn't know? huh!!! if you don't know i'll tell you, i just finished fucking your mother and sisters, coming soon i gonna fuck u.!!!!!!!
1 / မွတ်ဆလင်များ အတွက် ၀မ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းကောင်း
ထိုကြောင့် မည်သည့်ဂိုဏ်းက မှန်သည်ကို မသိသော မွတ်ဆလင်များ က ထိုနည်းလမ်းကို သုံးပေသည်။ ထို နည်းလမ်းသည်စိတ်ချရသည်.။ဆွန်နီဖြစ်စေ၊ ရှီးယိုက်ဖြစ်စေ ကောင်းကင်ဘုံရောက်ဖို့ သေချာသည်။ သို့ သော် ယခုချက်ချင်း သေရမည်။ယနေ့ ခေတ်စားနေသော အသေခံ ဗုံးခွဲ သမားများဧ။် ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကောင်းကင်ဘုံ ရောက်ရန်သေချာပြီး အပျိုစင် ၇၂ယောက် +လူပျိုပေါက် ၂၈ယောက်နဲ့ လိုးရဖို့ ဖြစ်သည်။
မွတ်ဆလင်က ခရစ်ယာန် ကိုသတ်ရင်တော့ဟုတ်ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် မွတ်ဆလင်အချင်းချင်း ဆွန်နီနဲ့ရှီးယိုက် နဲ့ အချင်းချင်းသတ်ပြီး အကုန်လုံးသေကုန်ရင်ရော ဘယ်သူက ကောင်းကင်ဘုံရောက် မှာလဲ။ ဆွန်နီ မွတ်ဆလင်က ကောင်းကင်ဘုံရောက်မှာလား၊ ရှီးယိုက် မွတ်ဆလင်က ကောင်းကင်ဘုံရောက်မှာလား၊ ဒါမှမဟုတ် ဆွန်နီမွတ်ဆလင်က ရှီးယိုက် မွတ်ဆလင်ကို သတ်ရင် သတ်တဲံ ဆွန်နီမွတ်ဆလင်က ကောင်းကင်ဘုံရောက်ပြီး၊ ရှီးယိုက် မွတ်ဆလင်က ငရဲကျမှာလား၊ဒါမှမဟုတ် အသတ်ခံရတဲ့ ရှီယိုက် မွတ်ဆလင်က ကောင်းကင်ဘုံ ရောက်ပြီး သတ်တဲ့ ဆွန်နီ မွတ်ဆလင်က ငရဲကျမှာလား။ အားလုံးငရဲကျဖို့ က ၉၉% ရှိသည်။